Imba Yonke IyasiKho
Sisoloko siyeka ukuba sicinge ngako njengoko sihamba malunga nobomi bethu bemihla ngemihla, kodwa sinomdla. Yonke into esiyifumayo kwindalo ibalulekile. Yona ibhloko yokwakha yonke into: wena, mna kunye nobomi bomhlaba, iplanethi esihlala kuyo, iinkwenkwezi, kunye neendlwana. Ngokuqhelekileyo ichazwa njengento nayininzi kwaye inomthamo wendawo.
Senziwe ngama-athomu kunye nama-molecule, nto leyo ibalulekile.
Inkcazo yenkalo yinto enomthwalo kwaye ithatha indawo. Oku kuquka into eqhelekileyo kunye nomcimbi omnyama .
Nangona kunjalo, loo nkcazo yendawo ibuyele kwimeko eqhelekileyo . Izinto ziguquka xa sifika kumbono omnyama. Makhe sithethe ngomcimbi esiya kubona, kuqala.
Umcimbi oqhelekileyo yimiba yokuba sibona yonke indawo. Ngokuqhelekileyo kuthiwa yi "baryonic" kwaye yenziwe nge-leptons (i-electron umzekelo) kunye ne-quarks (izakhiwo zakhiwo zeeponon ne-neutron), ezingasetyenziselwa ukwakha ama-athomu kunye nama-molecule, oko ke, yonke into evela kubantu ukuya kwiinkwenkwezi.
Umcimbi oqhelekileyo ukhanyisa, kungekhona ngokuba "ukhanyisa", kodwa ngenxa yokuba udibanisa i-electromagnetically kunye ne-gravitationally kunye neminye imiba kunye nemitha .
Enye into ebalulekileyo yesiqhelo i- antimatter . Zonke iinqununu zine-anti-particle ene-mass mass kodwa inxamnye ne-spin kunye nentlawulo (kunye nomrhumo wombala xa kusebenza).
Xa umcimbi kunye ne-antimatter idibanisa ukubhubhisa nokudala amandla ahlanzekileyo ngendlela ye- gamma rays .
Ngokuphambene nombandela oqhelekileyo, into ebumnyama ibaluleke ukuba ayinakhanya. Okokuthi, ayixubani nesebenzisa i-electromagnetically kwaye ke ibonakala ibumnyama (oko kungayi kubonakalisa okanye kuphephe ukukhanya).
Uhlobo oluthile lwento emnyama alukwazi kakuhle.
Okwangoku kukho iingcamango ezintathu ezisisiseko malunga nobume obumnyama:
I-Cold dark matter (i-CDM) : Kukho omnye umviwa obizwa ngokuba yi-particle inxinankulu (WIMP) engabonakaliyo enokuthi ibe sisiseko sombono omnyama obandayo. Nangona kunjalo, asikwazi into eninzi malunga nayo okanye indlela eya kuvela ngayo. Ezinye iimeko ze-CDM ziquka ii-axoni, nangona zingakaze zifunyanwe. Ekugqibeleni, kukho ii-MACHOs (izinto eziqhelekileyo ze-halo izinto), Zingachaza ubunzima obulinganiselwe bomcimbi omnyama. Ezi zinto ziquka izimbobo ezimnyama , iinkwenkwezi zamandulo ze-neutron kunye nezinto zeeplanethi ezingabonakaliyo (okanye phantse njalo) kodwa ziqukethe ubuninzi obuninzi bobunzima. Nangona kunjalo, kukho ingxaki. Kuza kubakho ukuba baninzi (okungaphezulu kunokuba kulindeleke ukuba banikwe iminyaka yobudala) kunye nokusabalalisa kwabo kuya kufuneka kumangaliswe (akunakwenzeka?) Ifanelwe ukucacisa into ebumnyama abaye bayifumana "ngaphandle".
Ubume obumnyama (WDM) : Le fomu yomcimbi omnyama kucatshangelwa ukuba yenziwe nge-neutrinos oyinyumba. Ezi ziyi-particles ezifana neutrinos eziqhelekileyo zigcina ukuba zikhulu kakhulu kwaye azidibanisi ngokusebenzisa amandla angenamandla. Omnye umviwa weWDM yi-gravitino. Le ngqungquthela yezinto eziza kubakho xa kufuneka inkolelo yobuhle - ukudibanisa ukuhambelana ngokubanzi kunye ne-supersymmetry-fumana ukulandelana. I-WDM yinto ekhangayo yokuchaza into ebumnyama, kodwa ubukho be-neutrinos okanye i-gravitinos engummangcwaba inengqiqo.
Umnyama omnyama (HDM) : Iingqungquthela ezithathwa njengento ebomvu sele ikhona. Babizwa ngokuthi "neutrinos". Bahamba malunga nantoni yokukhanya kwaye 'bangahlanganisi' ndawonye ngendlela esenza ngayo umcimbi omnyama. Kwakhona kunikezwa ukuba i-neutrino iphantse ininzi, ixabiso eliyimfuneko kubo liza kufuneka ukuba lenze inani lemnyama ekhoyo. Enye inkcazo kukuba kukho uhlobo olungafumanekiyo okanye i-flavour ye-neutrino eyafana neyo eyaziwayo ukuba ikhona. Nangona kunjalo, bekuya kuba nobukhulu obukhulu kakhulu (kwaye ke mhlawumbi isantya esicothayo). Kodwa oku kuya kuba kufana nokufana nomnyama omnyama.
Uxhumano phakathi kweMat and Radiation
Ngokomxholo ka-Einstein wobudlelwane, ubunzima kunye namandla alinganayo. Ukuba i-radiation eyaneleyo (ukukhanya) idibanisa namanye ama-photons (elinye igama elithi "i-particle") ephezulu ngokwaneleyo, ubunzima bunokudalwa.
Inkqubo eqhelekileyo yile ngqungquthela ye-gamma ray kunye nomnye uhlobo (okanye enye i-gamma-ray) kunye ne-gamma-ray "iya kuvelisa".
Oku kwenza i-electron-position position. (I-positron yinkqutyana echasene ne-electron.)
Ngoko ke, ngelixa i-radiation ingacatshangwanga ngokucacileyo into (ayinayo inqwaba okanye ithatha umthamo, ubuncinane kungekho ngendlela ecacileyo), idibene nomba. Oku kungenxa yokuba imisebe yakha umba kwaye umba udala imisebe (njengokuba umcimbi kunye ne-anti-matter collide).
Ukuthabatha umcimbi-uxhumano lweemitha ezihamba phambili, i-theorists iphinda iphakamise ukuba imisebe engaqondakaliyo ikhona kwindalo yonke . Kuthiwa amandla omnyama . Ubume beemisebe eziyimfihlakalo ayiqondwanga nhlobo. Mhlawumbi xa kuqondwa into emnyama, siya kuqonda ukukhanya kwamandla omnyama.
Ukuxininisa kwezinto eziqhelekileyo
Ziyiphi iifom ezenza i-Diatomic Molecules?
Yintoni iChemistry? Yiyiphi i-Chemistry kunye neyiphi i-Chemist Do
IsiTaliyane IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa Isi
IziTishu zeMeristematic kwiZityalo: Inkcazo
Inkcazo yamanzi enzima
Iimilo zeCigar kunye nobukhulu
Izihloko ezi-5 zeJografi
I-Art Symbols Dictionary: Iintyatyambo nezityalo
I-1970 i-Sitcoms yabesifazane: UMary Tyler Moore Show
UFilipu Umpostile - Umlandeli kaYesu Kristu
Ukudibanisa nabantu abancinci
Pomona ,kazikazi ka-Aples
Imigaqo yeGalufa-Umgaqo-7: Yenza umsebenzi
Yintoni i-nitrogen Narcosis?